एक देशभक्त मधेशी संजिव झा भन्छन कानुन संसोध गरेर सिके राउतलाइ गोलि ठोकुम ~ Khabardari.com
एक देशभक्त मधेशी संजिव झा भन्छन कानुन संसोध गरेर सिके राउतलाइ गोलि ठोकुम
नेपाल नीतिमा किन असफल भयो भारत ?
मेरो घर जनकपुरस्थित रेल–वे स्टेशन नजिकै हो । बोलचालको ठेट भाषामा ‘टिसन’ भन्ने गरेका छन् । प्रायः त्यहाँ कुनै न कुनै जादूगरले आफ्नो खेला हेराइराखेको हुन्छ । तर उसले हेराउँछ जादु र बेच्छ औंठी त्यो पनि मनपसन्द । त्यो औंठी लगाउने वितिकै मनको इच्छा पुरा हुन्छ । भारत भने त्यही जादुगर हो । जसले मधेसी मोर्चा र आफूलाई प्रभावशाली नेता भन्नेहरुलाई त्यही औंठी बेचिरहेको छ ।
नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, समानताहरु पनि प्रस्तावनामा छन् । भारतको संविधानमा पनि यिनै कुराहरु छन् । नेपालको हकमा समावेशी सिद्धान्त छ । तर भारतको संविधानमा छैन् । त्यसैले भारतको संविधान भन्दा नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ । त्यही भएर आफ्नो ‘आङको भैसी नदेख्ने, अरुको आङमा नभएको जुम्रा पनि छ कि भनेर शंका गर्ने’ भारतमै अलग कास्मिरको मुद्दा विकराल रुपले उठिरहेको छ । नागाल्याण्डजस्ता प्रान्तहरुले आफूलाई थिचोमिचो गरेको र आफ्नै देशमा अधिकार विहीन बनाएकोले गर्दा उल्काओवादको नारा जोडले उठेका छन् । महाराष्ट्रमा आफ्नै देशमा नागरिकलाई लखेटी लखेटी पिट्छन् । र त्यहाँबाट विस्थापित गराउने काम भइराखेका छन् । गोर्खाल्याण्डमा अलग राज्यको माग बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । यस्ता विभिन्न किसिमका असमानताका समस्याहरु उनको आफ्नै देशमा छन् । आफ्नो देशको समस्यामा ध्यान नदिइ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाललाई आफ्नै एउटा प्रान्त सम्झेर गरेको राजनीतिक व्यवहार निन्दनीय र असैह्य छ ।
यस्तै व्यवहारका कारण कुनै पनि छिमेकी देशसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन् । नेपालको मामलामा पनि भारतको कुटनीति असफल भएको देखियो । कहिल्यै कसैको गुलाम र दासत्व नस्वीकारेको नेपाल र नेपाली जनतामाथि भारतले प्रभुत्व कायम गर्छु भन्ने सोच्नु ‘दिवास्वप्न’ मात्रै हो । दुई चार वटा स्कुलको भवन बनाउने, गाडी वितरण गर्ने र दुई चार जना नेताको छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिँदैमा सवै जनतालाई आफ्नै मार्गमा डोहोर्याउन सक्छु भन्ने हाँस्यास्पद चिन्तन हो । नेपाल सार्वभौम हो, हुन्छ र भइरहन्छ । यसमा कसैले पनि भ्रम नपाले हुन्छ ।
मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई कसरी लिने ?
मधेसी मोर्चालाई जनताले नै बहिस्कार गरिसकेका छन् । होलीलाई बहिस्कार गर्न मोर्चाले गरेको आह्वानलाई तराई मधेसका जनताले उल्टै बहिस्कार गरे । आन्दोलनको नाममा नेताहरुको रोजीरोटी चलेपनि जनतालाई केही फाइदा नभएको अव सवैले बुझिसकेका छन् । आन्दोलनको नाममा शक्ति केन्द्रबाट ठूलो रकम लिने र त्यसलाई पचाउन जनता उचाल्ने मोर्चाको ‘गोरख धन्दा’ हो ।
को हुन सीके राउत ?
सीके राउत भनेको माटोभित्रको गड्यौला हो । भारत र अमेरिकाको डिजाइन अन्तर्गत परिचालिन व्यक्ति हो । पहिले नै राज्यले मुद्दा लगाएर राउतको प्रचारप्रसार गर्ने काम राज्यले नै गर्यो । गहन अनुसन्धान गरेर मात्र राजद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्नेमा हचुवाको भरमा पक्रने र छोड्ने काम प्रहरी प्रशासनले गर्यो । यस्ता व्यक्तिलाई बीच चौरमा ठाडै गोली हान्नुपर्छ । वाक स्वतन्त्रताको अर्थ आमालाई गाली गर्ने होइन । सीके राउत देशद्रोही हो । कानुन संशोधन गरेर भएपनि राउतलाई गोली ठोक्नुपर्छ ।
सरकारको कामकारवाही कस्तो छ ?
एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई गर्ने व्यवहार नेपाल सरकारले गरेको छ । खुल्ला सीमाना भारतलाई भन्दा नेपाललाई घाटा हो । त्यसैले चाडै काँडेतार लगाई सीमा बन्द गर्नुपर्छ । सुस्ता लगायत अन्य अतिक्रमित भूमि कुटनीतिक तवरले अविलम्ब फिर्ता गराउनुपर्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कसैले पनि गर्न नसकेको दुई वटा काम गरेको छ । राष्ट्रियताको विषयमा धेरै राम्रो काम गरेपनि विकास र जनजीविकाको विषयमा काम हुन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री जेट स्पिडमा भएपनि सचिवालय र मन्त्रीहरुको काम त्यस्तो देखिएन । मन्त्रीहरुको काम भाषण गर्ने मात्र भयो । भाषणलाई कुनै पनि मन्त्रीले व्यवहारमा उतार्न सकेको देखिदैन । विशेष परिस्थितिमा असाधारण सरकार बनेको कुरा हेक्का राखी सम्बन्धित सवैले सोही अनुसारको काम गर्नुपर्छ । जनताको मन छुने काम गर्नुपर्छ ।
झा, युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं मधेस ब्यूरो प्रमुख हुन् ।
नेपालपाटी बाट साभार